Madaxweyne Farmaajo oo ku ciiday Saldhig military [SAWIRRO]
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta farxadda munaasabadda ciidda la qaatay Guutada 14ka Oktoobar ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, isaga oo salaadda ciidda kula tukaday Dugisga Tabobarka ee Janaraal Goordan.
Salaaddii ciidda keddib, Madaxweynuhu waxa uu u kuurgalay xaaladda dugsiga, isaga oo kormeeray hawlaha tabobarka ciidamada ee ka socda, halkaas oo uu warbixinno kaga dhagaystay saraakiisha tabobarka iyo maamulka dugsiga.
Madaxweyne Farmaajo ayaa inta uu ku sugnaa Janaraal Goordan waxa uu sidoo kale ka qayb galay xaflad lagu dhiirrigelinayo Ciidanka Xoogga Dalka ee ku sugan halkaas. Xafladda waxa ka soo qayb galay cutubyo ka tirsan Guutada 14-ka Oktoobar, Taliyeyaal, Taliye Xigeenno iyo saraakiil ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Munaasabaddu intii ay socotay waxa goobta lagu soo bandhigay suugaan iyo ruwaayado lagu dhiirrigelinayo Ciidanka Xoogga Dalka oo ay soo bandhigtay kooxda Horseed ee CXDS.
Gebogabadii waxaa goobta ka hadlay Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Janaraal Cabduwali Jaamac Gorod oo Madaxweynaha uga warxbiyey dadaallada lagu horumarinayo dhismaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Madaxweynuhu waxa uu ciidanka ugu hambalyeeyey munaasabadda Ciidul Adxaa, isaga oo si faahfaahsan uga hadlay muhiimadda uu ciidanku u leeyahay dib u soo noolaynta dawladnimada Soomaaliya.
Madaxweynuhu waxa uu xusay in kooxaha argagaxisada ahi ay yihiin shisheeye ku soo duulay Soomaaliya oo u taagan gumeynta iyo gumaysiga shacabka Soomaaliyeed, iyaga oo ugu soo gabbanaya diinta Islaamka.
Dhanka kale, Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qayb galay salaadda janaasada ee askari ka tirsanaa Guutada 14ka Oktoobar oo ku shahiiday hawlgalladii ay Ciidamada Xoogga Dalka kaga sifeeyeen kooxaha argagixisada ah deegaanno hoos yimaada Degmada Marka ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Dowladda Federaalka ayaa gashay go'doon siyaasadeed kadib markii ay Imaaraadka...
Sidee Al-Shabaab ku heshay Tuutaha guutada 14-ka October?
Soomaliya 24.08.2018. 00:27
Bog cusub oo u furmay Xiriirka Soomaaliya iyo Eritrea [DAAWO]
Soomaliya 28.07.2018. 22:33
Askar uu Imaaraadka tababaray oo lagu xukumay Muqdisho [Sawirro]
Soomaliya 19.07.2018. 15:28
Hub laga bililiqeystay Saldhigga Gordan oo lagu iibinayo Suuq madow [Sawirro]
Soomaliya 26.04.2018. 10:07
Soomaaliya oo ka feejigan Ebola oo lug lasoo galey bariga Afrika 16.06.2019. 19:01
Xukuumada oo "si juujuub ah" ku hirgelineysa Manjah cusub 16.06.2019. 15:21
Xaaska ra'iisul wasaare oo qiratay dacwad lagu soo oogey 16.06.2019. 14:39
Kenya oo farta ku fiiqday dalalka "hurinaya" xiisada Soomaaliya 16.06.2019. 13:35
Al-Shabaab oo iska hor-imaad looga dilay "sarkaal Kenyaan ah" 16.06.2019. 08:25
Faroole: Garowe waa caasimadii PL, horumarkeeda cid gaar uma aha 16.06.2019. 07:49